UGeofumadas uqhakamshele uWang Haitao, usekela-Mongameli weSuperMap International, ukubona isandla kuqala kwisisombululo sezolimo, esinikwa yi-SuperMap Software Co, Ltd. 1. Nceda usixelele ngohambo lwe-SuperMap lokuzivelela njengomboneleli ophambili isuka eTshayina iGIS umboneleli weSuperMap Software Co, Ltd ngumnikezeli wezinto ...
Kwimeko yethu yaseMesoamerican kunye ne-tropical global jikelele, iDengue isifo esifanayo ngexesha lezimvula. Ukwazi apho ininzi inani leziganeko ezenzekayo ngokuqinisekileyo ngumsebenzi apho izicelo ze-GIS zinikeza iziphumo ezibalulekileyo. Ndiyakhumbula ukuba xa ndiseyingane, i-dengue yayingekho ...
I-SuperGeo Technologies, yamemezela intsebenziswano enomdla kunye ne-GPS PL, imodeli yomsebenzi ekhangele ingqalelo kwaye yonke imihla ikhuthazwa yinkampani ukuba kunokuba ikhuphisane kwiimarike, yenza ukusebenzisana ekufuneni amava angcono kubasebenzisi. Ezi nkampani zibini zinika izixazululo ze-GIS kumadivayisi eselula, ngenxa yazo ...
Kwiveki eledlule ndiye ndathetha nomhlobo waseCanada ondixelele ngamava abaye basebenzisa i-GIS Pro kwiinkqubo zophando lwe-cadastral. Sifinyelele ekugqibeleni ukuba nangona kukho ezinye izixhobo, kwizinto ezikuSitolo seSicelo le nto ukuba ayilona nto ingcono ye-iOS, ...
I-OpenSource ikhule ngezixhobo ezifana ne-gvSIG kunye neQuantum GIS, ifezekisa icandelo leentengiso ngokubanzi elimela isoftware yejomatics. I-SuperGIS yenye yezi zixhobo zokuphatha, ethi ngexabiso eliphantsi ijonge ukuzimisa phambi komda obanzi i-ESri kude kube ngoku.
ArcGIS-ESRI, ezintsha, SuperGIS
Ukususela bemeko- imodeli SuperGIS sifumana ezinye rescatar.Departamentos iindaba ezixabisa of Public Works and Agriculture Fujairah Buyiphucula nokugcinakala kwezibonelelo SuperGISFujairah yenye United Arab Emirates, kuMbindi Mpuma. Ziye zagqiba ukuphumeza ubuchwepheshe be-SuperGIS ekulawuleni umjikelezo wobomi bezakhiwo, ...
I-SuperSurv isixhobo esikhuliswe ngokukodwa kwi-GPS kwi-Android, njengesicelo esidibanisa imisebenzi ye-GIS onokuyifumatha idatha ensimini ngokufanelekileyo nangokwezoqoqosho. I-GPS kwi-Android Inguqu yakutshanje, i-SuperSurv 3 ijika i-mobile ibe ngumqokeleli, nge-geolocation, ukuthunyelwa kwemephu, ukubonisana, ukulinganisa nokulandelela ...
Ideskithophu ye-SuperGIS, ukuthelekisa ...
I-SuperGIS inxalenye yesimo se-Supergeo endiyithethayo ngeentsuku ezimbalwa ezedlule, ngempumelelo kwimpondo yaseAsia. Emva kokuvavanywa, nakhu ezinye zeembono endizithandayo. Ngokuqhelekileyo, yenza malunga nokuba nayiphi enye inkqubo yo khu phiswano. Ingasebenza kuphela kwi-Windows, mhlawumbi iphuhliswe kwiC ++, ngo ...
Kwimeko yethu yaseNtshona, i-SuperGIS ayizange ifinyelele kwindawo ebalulekileyo, nangona kunjalo eMpuma, ithetha ngamazwe afana neIndiya, i-China, iTaiwan, i-Singapoore-ukukhankanya ezimbalwa - i-SuperGIS inomdla othakazelisayo. Ndicwangcise ukuvavanya ezi zixhobo ngexesha lonyaka we-2013 njengoko ndenze nge gvSIG kunye ne-Manifold GIS; ukuthelekisa ukusebenza kwayo; ngoku ngoku ...
Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala, SuperGIS